दूध र दही: कति फाइदाजनक, कति हानिकारक ? सबैले जानीराखौं – Annapurna Daily
दूध र दही: कति फाइदाजनक, कति हानिकारक ? सबैले जानीराखौं
On Apr 29, 2022 794
काठमाडौँ । हाम्रो समाजमा दुधका बारेमा धेरै गलत धारणा पाइन्छन् । हाडजोर्नीका लागि क्याल्सियमको आपूर्ति गर्न प्रशस्त मात्रामा दुध खाने धेरै छन् । प्राचिनकालदेखि नै दैनिक दुध खाने चलन भएको हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। पोषणको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने दुधलाई एउटा पोषिलो खानाको रुपमा मान्न सकिन्छ।
यसले पर्याप्त क्यालोरी प्रदान गर्छ, जसले हामीलाई शक्ति प्रदान गर्छ। बालबालिकाको शारीरिक विकासका लागि प्रोटिन नभई नहुने कुरा हो। दूध प्रोटिनको धेरै राम्रो स्रोतको रुपमा मानिन्छ। बिरामीहरुलाई पनि पर्याप्त प्रोटिन र इनर्जी चाहिने भएकाले दुध खानु अत्यन्तै उपयोगी हुन्छ त्यसैले ईनर्जी र प्रोटिनको आवश्यकता भएमा दैनिक दुध खान मिल्छ।
दुधका यी फाइदा यसको एउटा पक्षमात्रै हो । दुधका अनेक बेफाइदा पनि छन् । विशेष गरी चिल्लो नझिकिएको दुधमा कोलेस्ट्रोल पर्याप्त मात्रामा हुन्छ । गाईको दुध भन्दा भैंसीको दुधमा झन बढी कोलेस्ट्रोल र क्यालोरी हुन्छ ।
एउटा स्वस्थ पुरुष वा महिलालाई थप क्यालोरी र कोलेस्ट्रोल दुवैकाे आवश्यकता हुँदैन । दुधको प्रयोग गरेमा कोलेस्ट्रोल बढ्ने र अनावश्यक क्यालोरीले मोटोपनाको सम्भावना पनि बढाउने हुनाले दुधको प्रयोग गर्नुपर्ने अवश्यकता नरहेको तथ्य बुझ्न सकिन्छ ।
दुधमा पाइने कोलेस्ट्रोलले रगतमा कोलेस्ट्रोलको मात्रा बढाएर मुटुरोग लगाउने सम्भावना बढाउँछ । त्यसकारण बढ्दो बालबालिकालाई छोडेर कसैले पनि फ्याट भएको दुध नै खानु जरुरी देखिदैन। कुपोषण भएका वा बिरामीहरुलाई दुध दिनु अलग कुरा हो।
लो फ्याट दुध (Low Fat Milk) जसमा फ्याटको मात्रा १-२ प्रतिशत भन्दा कम हुन्छ, नेपालमा सजिलैसँग नपाइने भएकाले चिल्लो (Fat) झिकेको दुध थोरै मात्रामा खानमिल्छ । तर मोटो मानिसले वा कोलेस्ट्रोल बढी भएको व्यक्तिले दुध नखाए राम्रो हुन्छ । चियामा पनि धेरै दुधको प्रयोग नगरे राम्रो हुन्छ ।
दुधबाट फ्याट (तर) भिकेर दही बनाएको खान मिल्छ । फ्याट वा गुलियो नभएको दही स्वास्थ्यका लागि बरु राम्रो मानिन्छ । प्रतिदिन खानामा चिल्लो कम भएको सादा (गुलियो नभएको) दही खानु राम्रो हुन्छ । यसले खानालाई स्वादिष्ट | मात्रै होइन, स्वस्थकर पनि बनाउँछ । नेशनल कार्डियाक सेन्टरको ब्लगबाट